यति ठुलो काण्डमा मुछिए अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन, के भन्छन र शाहरुख प्रहरी ? — Sanchar Kendra
१सोमबारदेखि हुने सबै परीक्षाहरु स्थगित
२आज मध्यरातिदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि
३प्रचण्डको अर्को प्रस्तावले गठबन्धनमा गयो भूकम्प, के भने त्यस्तो ?
४सीता दाहाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, आईसीयूमा उपचार हुँदै
५एमालेले भन्यो- स्थानीय चुनाव पर धकेल्न पाइँदैन
६दशौँ सन्तानका रुपमा छोरी जन्मिएसँगै ३३ वर्षीया छत्यालले प्राण त्यागिन
७एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
८बाटो भुलेकी महिलालाई होटल पुर्याएर सामूहिक बला’त्कार
९न्यूनतमसँगै अधिकतम तापक्रम घट्दा चिसो ह्वात्तै बढ्यो
१०आज देशभरका अदालत बन्द, यस्तो छ कारण
११कानपुरमा भइरहेको चोरी अमेरिकामा लाइभ देखियो, भारतभर हंगामा
१२एन्टीबायोटिक औषधीले काम गर्न छोड्यो, संसारभरी लाखौँको मृत्यु-रिपोर्ट
काठमाडाैं । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान ‘मुम्बई क्रुज ड्रग्स छापा’मा मुछिएका छन्। इन्डिया टुडे अनुसार भारतको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ले एउटा पानी जहाजमा आकस्मिक छापा मार्ने क्रममा बलिउड अभिनेता खान पुत्र आर्यन पनि कारवाहीमा परेका हुन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित खबर अनुसार जहाजमा लागूपदार्थ प्रयोगको सूचना पाएपछि एनसीबीका क्षत्रीय प्रमुख वानखेडेसहितका पदाधिकारीले जहाजमा छापा मारेका थिए। कारवाहीमा केहीलाई पक्राउ गरिएको छ भने आर्यनसँग एनबिसीले सोधपुछ गरिरहेको बलिउड हंगामाले लेखेको छ।
छापा मारिएको जहाज तीन दिनको संगीत यात्राका मुम्बईबाट गोवा प्रस्थान गरेको थियो। जहाजमा बलिउड, फेसन र व्यापार क्षेत्रका मानिसहरु सवार रहेको जनाइएको छ। तिनैमध्ये एक आर्यन पनि थिए। आर्यन विरुद्ध कुनै आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। तर उनको मोबाइल एनबिसी अधिकारीले जाँचबुझका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।
यसैबीच तेलुगू र तमिल फिल्म उद्योगकी चर्चित अभिनेत्री सामन्था रुथ प्रभु र अभिनेता नागा चैतन्यले डिभोर्सको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले विवाहको ४ वर्षपछि सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका हुन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै समन्थाले केही दिनमै सम्बन्धविच्छेद गर्ने घोषणा गरेकी हुन्।
उनले शनिबार पोस्ट गर्दै भनेकी छन्,‘हामी चाँडै नै अलग हुँदैछौं। मैले धेरै सोच विचार गरेर नै आफ्नो बाटो लाग्नको लागि पति र पत्नीको रूपमा अलग हुने फैसला गरेको छु। हामी भाग्यशाली छौं कि एक दशकको मित्रता नै हाम्रो सम्बन्धको मूल थियो। हामीलाई विश्वास छ हामीबीच एक विशेष सम्बन्ध रहनेछ।’
उनले थपिन्,‘हामी शुभचिन्तक, प्रशंसक र मिडियालाई हाम्रो यो कठिन समयमा साथ र सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं।’
‘यो दम्पतीको सम्बन्ध बचाउन दुवैतिरको परिवारले धेरै प्रयास गरे, तर सबै असफल भयो,’ तेलुगू फिल्म क्षेत्रका स्रोतले भनेका छन्, ‘सामन्थासँगै बसेको घर छोडेर नागा आफ्नो बुबाआमासँग बस्न गएका छन्।’ ‘द फ्यामली म्यान’ले पाएको सफलतासँगै सामन्थाको अभिनयलाई लिएर धेरै प्रशंसा भएको थियो।
बलिउडबाट पाएको मायापछि उनी आफ्नो अभिनय करियर अझै अगाडि बढाउन चाहन्छिन्। यता नागा चैतन्यले पनि आमिर खानको नयाँ फिल्म ‘लाल सिंह चड्डा’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेका छन्। योसँगै उनको बालबच्चा जन्माएर परिवार ठूलो बनाउने चाहना छ।
यही फरक चाहनाको कारण सामन्था र नागाबिच मनमुटाव भएको उनीहरुको भित्री स्रोतले जनाएको छ। सामन्था र नागाको पहिलो भेट सन् २००९मा रिलिज भएको फिल्म ‘ये माया चेसावे’को सेटमा भएको थियो। त्योबेलादेखि नै उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो र दर्शकहरूले पनि यो जोडीलाई मन पराएका थिए।